Sadio Mane Oo La Baxsaday Liverpool
HomeWararka MaantaSadio Mane Oo La Baxsaday Liverpool
Gool uu wakhtigii dheeriga ahaa ee lagu daray ciyaarta Sadio Mane u dhaliyey kooxdiisa ayaa ka caawisay Liverpool inay guul kala hoyato Everton oo ay marti ugu ahayd garoonka Goodison Park.
Daniel Sturridge oo beddel kusoo galay ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyey ayaa kubbad uu la dhex jibaaxay difaaca Everton, waxa uu la beegsaday laag xoog badan oo uu ku liishaamay goolka, waxaana ay ku dhacday barta oo ay dib ugu soo noqotay ciyaartoyga dhexdiisa, taas oo uu Sadio Mane dib ugu celiyey shabaqa ay agtiisa ka soo noqtay, sidaana waxay Liverpool kaga gudubtay garoonka imtixaanka ah ee Goodison oo ay Arsenal ku simbiririxatay toddobaadkii hore.
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Everton ee Ross Barkley ayaa nasiib badan lahaa qaybta dambe ee ciyaarta markii uu khalad ku galay Jordan Henderson, kaas oo ay falan-qeeyeyaasha ciyaaruhu isku waafaqeen in uu u qalmayey kaadh cas oo toos ah, laakiin garsooraha ayaa ku abaalmariyey kaadhka digniinta ee huruudda ah.
Liverpool ayey guushani ka caawisay inay kor ugu ruqaansato kaalinta labaad ee horyaalka oo ay yeelatay 37 dhibcood, waxaanay 6 dhibcood ka hoosaysaa kooxda hoggaanka haysa ee Chelsea. Manchester City oo kaalinta saddexaad ku jirta ayaa haysata 36 dhibcood, halka Arsenal ay fadhido kaalinta afraad iyo 34 dhibcood. Waxa ay hal dhibic oo kaliya ka sarraysaa Tottenham oo leh 36 dhibcood iyo Manchester United oo 30 dhibcood iyo kaalinta shanaad isku ballaadhinaysa.
Alves: “Dadku Waxay I Moodaan Nin Waalan”
10/05/2017 Abdiwahab Ahmed
Barça Oo Jebisay Rikoodhkii Gool Dhalinta Spain